ngokuvamile Ukukhwehlela kuyinto engumngane umkhuhlane nezinye ipheshana zokuphefumula pathologies ezithathelwanayo esibangela ukungakhululeki, ikakhulukazi uma ehambisana ikhanda. Ngokuvamile kwenzeka ngenxa backlash umzimba nezilonda. Nokho, ngezinye izikhathi lapho ukhwehlela unika ekhanda ngenxa ukuthuthukiswa izifo ezingathi sína kwababhemayo.
Kwasendaweni ukuphathwa ikhanda lapho ukhwehlela
Sici isici sale zokugula - waba ukwanda okukhulu kwezincwadi ngokubukeka ubuhlungu, okuyinto ngokushesha ubalekela sifikile ezimatasa. Ezimweni eziningi, syndrome ubuhlungu ithatha Ukubhoboza, ukusika noma okhanda uhlamvu, ngokuvamile lunikeziwe nogologo.
Kabi spasm reflex ka yomoya asinikeze elingenhla noma isifunda occipital ikhanda, yakwazi ukuqhubekela phambili emazinyweni abaphazamisa umuntu amahora ambalwa. Kodwa uma emva 3 amahora, ubuhlungu akusho ukuncipha ngemva ukuhlaselwa ukukhwehlela, kungcono ubonane nodokotela.
Kungani aholele engqondweni yakho uma ukhwehlela?
Ubuhlungu ikhanda ngenxa ukukhwehlela singenzeka ngenxa yezizathu ezihlukahlukene:
Izinkinga nemithambo yegazi kanye inhliziyo. Abantu abanale nkinga yokungadli kahle enjalo ngokuvamile ukukhwehlela unika ikhanda. Ngaphezu kwalokho, kule ndaba zokuphefumula spasm reflex kwandise ingcindezi yokufuna ngaphakathi Yekhanda, ekugcineni abe ubuhlungu babulawa.
Yokungezwani komzimba. Lesi senzakalo ikakhulukazi ebonwe izingane Yiqiniso, abadala futhi uhlangabezana ke. Ukuphathwa yikhanda izimo ezinjalo zenzeka phezu ukuxhumana allergen, okuholela ukwanda ingcindezi intracranial. Uma ukukhwehlela yokunikeza ikhanda ngokumelene ngemuva kwe-njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, ukungakhululeki iqhubeka cishe 2 amaviki, ngaphandle akukho phlegm.
isifuba somoya bronchial nokubhema. izimbangela okunjalo of bekhanda kuyizinto ezivamile. Umzimba ngesikhathi esifanayo buthakathaka namasosha omzimba futhi - awe bhú phansi. Konke lokhu kubangela ukuntuleka komoya-mpilo, kuhambisana ubuhlungu ekhanda nokukhwehlela.
nezifo ezingamahlala khona. Bavame avuse bekhanda uma ukhwehlela. Ngaphezu somoya, okuholela efanayo izinkinga sikashukela, sinusitis, abanale nkinga.
Umkhuhlane. Khwehlela nalesi sifo kusisiza sicacelwe amaphaphu yomoya ka isikhwehlela, kanye nemfiva - wokuqeda emzimbeni igciwane. Ubuhlungu syndrome ne imikhuhlane esifundeni ekhanda kukhona zokudakwa, ngakho isiguli uzizwa ebuthakathaka kanye isiyezi.
Uma ubunzima uye yayiqhubeka, qiniseka ukubona udokotela, ngoba lapho kwenzeka akunika ukukhwehlela, izizathu zihlukene futhi ngaso sonke isikhathi-computer engenangozi.
Ubuhlungu ikhanda sifo Arnold Chiari
Phezu ukuthola lokhu zokugula e isiguli, ukwelashwa wenziwa ngokuqinile ngaphansi kweso lodokotela. Phakathi anomalies enjalo iyahlukahluka isakhiwo ubuchopho, okuholela thuthuva ezahlukene ukusebenza cerebellum unesibopho ukubambisana.
Ngokuvamile, ukukhwehlela ezinzima kunikeza amabombo endaweni ongafanele ngesikhathi oblongata medulla. Izizathu ukubukeka Arnold Chiari syndrome zingase zihlanganise:
Ukuphuza utshwala, ukubhema kanye ukungondleki kahle phakathi nenkathi yokukhulelwa.
Anomalies lapho ubuchopho kakhulu lenyuka.
ukusetshenziswa engalungile izidakamizwa uthwele ingane.
Abantu abanemizimba ezwelayo, futhi ngokuvamile ikhanda uma ukhwehlela. Ukunika ikhanda kuleli cala isikhathi esingangenyanga, akukho isikhwehlela, akukho imfiva.
Ukuphathwa yikhanda ngesikhathi meteosensitivity
Umuntu okunempilo ngokuvamile akasabeli ekushintsheni izimo zezulu. Yingakho meteosensitivity kubhekwe ezinye izinto ezithinta ubuhlungu ekhanda uma ukhwehlela. Empeleni kusukela lesi sifo sithinta abantu abanezifo we sezinzwa, urinary, zenhliziyo omzimba, kanye nezinkinga uhlelo zemisipha.
Kodwa okubi kunakho konke kuyadingeka kulabo abaphethwe yesifo senhliziyo azalwa naso futhi dystonia semithambo. Sinenkosi zonke sikhatsi lesengetiwe ingcindezi ngaphambi esimweni sezulu esibi futhi kokuhlala isikhathi eside emakhazeni nasekushiseni, kuphumele i ukuzwa ezingemnandi esifundeni ekhanda. Kodwa ngo pathologies kwemigudu yokuphefumula izitho ubuhlungu kwenzeka ngesikhathi nomswakama eliphezulu futhi asemkhathini ingcindezi izinguquko. Lezi ziguli uhlushwa ukukhwehlela, okuvame unika ekhanda lakhe, iphika.
Lapho izinhlungu zithi ekhanda, eyabonakala ngenxa ukukhwehlela, ngeke nakancane sihambisane nakho, konke okunye anika whiskey, kangcono ukuthatha isinyathelo ukuze uphephe futhi ukuvakashela onguchwepheshe wokuthi yadalwa izinkinga zempilo ezingathí sina, noma ukuhlonza ngendlela efanele usaqala.
Ngaphezu kwalokho, ukuxilongwa kusivumela ukucacisa Imbangela ekwakhekeni isifo esithile. Uma ubuhlungu bekhanda zenzeka ngesikhathi ukukhwehlela, bese benika uthisha izivivinyo ezilandelayo:
Ukulinganisa ukuhamba kwegazi ebuchosheni.
Kanjani ukuthi uyoqeda ubuhlungu ekhanda ngesikhathi ukukhwehlela?
Lapho spasm reflex we yomoya unika ubuhlungu ekhanda, izindlela zokwelapha zincike siyini ngempela lesi sifo, okwabangela ukuqubuka kwalesi uphawu edabukisayo. Uma imbangela ukungakhululeki baba nezifo ezimbi sokucasuka ukuphazamiseka lonke umzimba, ukuphathwa kuhlanganisa iqoqo izinqubo okuhloswe ngazo ekulweni nesifo.
Qiniseka ukususa izimpawu ezingezinhle, uma unganqotshwa ikhanda uma ukhwehlela, ebunzini nentamo ndawo. Esimweni lapho ikhanda akuzona ingozi empilweni, balahle ukuqaleka kungaba ngokwakho ngokusebenzisa umuthi wezinhlungu. Okudambisa ubuhlungu uma ukhwehlela kuzosiza kule mikhiqizo: "Analgin", "Nurofen", "ibuprofen", "Spazmalgon" noma "paracetamol".
Noma kunjalo, ukwamukela lezi amaphilisi kufanele kube ngokuqapha, ikakhulukazi uma kufanele sihlanganise nabo neminye imithi. Kungcono uthintane onguchwepheshe, ngakho wacosha izidakamizwa ofanele kakhulu ubuhlungu ekhanda, ngoba esimweni ngasinye sihlukile.
Ukuyeka bekhanda izindlela zesintu
Lapho izinhlungu zithi uma ukhwehlela akunika ikhanda, futhi udokotela ngokushesha nje lapho akunakwenzeka, ukusiza njengezindlela zokwelapha ezivamile. Ngokwesibonelo, lapho izinkinga ezifanayo ngokuvamile zisebenzisa amaphakethe ukuthi zisetshenziswa esiphongweni.
Ngokuphumelelayo aqede ubuhlungu ekhanda, ngisho aqede ukhwehlela uviniga. Ngenxa yalesi ukwelashwa uzodinga obuncane indwangu wasigcobhoza kuleli acid. ngebhandeshi uviniga ezazigcwele sisetshenziswa emathempelini nebunzi, kanti isiguli kufanele ulala ukuthutha. Lapho-ke uyafudumala, isuswe abese bacwilisa kulo mkhiqizo. Lapho isiyezi, inqubo kufanele simiswe ngokushesha.
Ubhekana ikhanda lapho ukhwehlela cindezela abandayo, njengoba zihlukaniswa vasoconstrictor imiphumela yako. Ngenxa yalezi zinjongo uzodinga amanzi abandayo nge ice. It oswakanyiswe gauze futhi isetshenziswa ikhanda, emva kwemizuzu 2, it is lasuswa futhi kwafakwa ngebhandeshi entsha.
Ayikho indlela kangako ngoba emizweni ubuhlungu endaweni ikhanda phakathi ukukhwehlela kuyinto itiye herbal. Umhluzi aqede hhayi nje izimpawu, kodwa futhi omuhle kuthinta wonke umzimba. It ibhalwe kusuka amaqabunga Mint, lobelia, anise, licorice kanye sundew. Nice uzizwe ezikhishwe kangcono kusukela Thyme, lemongrass, chamomile nezinye amakhambi.
Uma uma ukhwehlela unikeza ikhanda, akukuhle uyephuza ukwelashwa, kufanele athathe isinyathelo ngokushesha. Kuyinto efiselekayo kwasekuqaleni ukuqeda izimbangela yayo ikhanda alikhulumi nanokukhuluma kuphakama. Ukwelashwa kufanele kuqale izindlela elula futhi iphephe kakhulu, ezifana ukulibopha kanye infusions amakhambi, uma akekho lokhu kusiza, kufanele ubone udokotela khona sidle nezidakamizwa. Ungakhohlwa ukuthi kuphela onguchwepheshe angakunika umuthi ukwelashwa okuphumelelayo, ngoba esimweni ngasinye sihlukile.
I-Meningitis: izimpawu zokuqala, izimpawu kamuva
Yevgenia Obraztsova: Biography, lokusungula, empilweni yakho
Pinus densiflora: incazelo, ukusatshalaliswa futhi kubangela yokuqothulwa
Iqakala: behlupha ubuhlungu.